India: fahafatesan'ny COVID-4,529 vaovao miisa 19, tranga vaovao 267,334 24 tao anatin'ny XNUMX ora
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » India: fahafatesan'ny COVID-4,529 vaovao miisa 19, tranga vaovao 267,334 24 tao anatin'ny XNUMX ora
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao Mafana India • Vaovao • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Nihoatra ny rakitsoratra iray andro teo ho eo ny fahafatesan'ny olona 4,475 mifandraika amin'ny COVID napetrak'i Etazonia tamin'ny 12 Janoary, ny isan'ny maty tany India dia hita taratra ny fiatraikany ratsy tamin'ny fitomboan'ny isan'ny tranga tato anatin'ny herinandro vitsivitsy.
Ny tranga COVID-19 any India dia nahatratra 25,496,330 XNUMX androany
Tranga COVID-267,334 vaovao 19 24 voasoratra tao anatin'izay XNUMX ora lasa izay
Ny isan'ny maty COVID-19 tany India dia tafakatra 283,248 4,529 tamin'ny fahafatesany XNUMX
Raha ny filazan'ny India Minisiteran'ny fahasalamana sy fiahiana ara-pianakaviana, ny tranga COVID-19 an'ny firenena dia nahatratra 25,496,330 267,334 androany, ary tranga vaovao 24 283,248 no voasoratra tao anatin'izay 4,529 ora izay, ary XNUMX ny isan'ireo maty niaraka tamin'ny fahafatesan'ny olona XNUMX - ny isa avo indrindra isan'andro hatreto.
Nihoatra ny rakitsoratra iray andro teo ho eo ny fatin'olona 4,475 mifandraika amin'ny COVID napetrak'i Etazonia tamin'ny 12 Janoary, ny isan'ny maty maty tany India dia taratry ny fiatraikany ratsy ateraky ny fitomboan'ny isan'ny tranga tao anatin'izay herinandro lasa izay, izay nateraky ny fihenjanana vaovao.
Ny fitomboan'ny isan'ny maty any India dia namela tranom-paty sy fandoroana faty niady mafy, satria nameno ny fandriana hopitaly ireo marary COVID-19, maty vokatry ny tsy fahampian'ny oksizena, na nolavina fitsaboana tanteraka tany amin'ny tobim-pitsaboana efa feno.
Mbola misy 3,226,719 ny tranga mavitrika ao amin'ny firenena, satria nisy fihenan'ny tranga 127,046 24 tao anatin'ny XNUMX ora lasa izay. Ny isan'ny tranga mavitrika isan'andro dia niha-nihena tao anatin'ny andro vitsivitsy lasa izay, taorian'ny fitomboan'ny fitomboan'ny volana aprily teo.
Nahatratra 21,986,363 ny olona sitrana sy nivoaka ny hopitaly hatreto manerana ny firenena.
Ao anatin'ny tolona hanodinkodinana ny fiolahana tranga COVID-19 ny ankamaroan'ny fanjakana ao amin'ny firenena dia nametraka tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina sy ny fanidiana sasany na tanteraka.
Amin'izao fotoana izao dia mandeha ny dingana fahatelo amin'ny vaksinin'ny COVID-19, mandrakotra ny olona rehetra 18 taona no ho miakatra. Na izany aza, tsikaritra ny tsy fahampian'ny vaksinina manerana ny firenena.
Raha nitombo be ny fahafatesan'ny COVID-19 tany India tao anatin'ny iray volana lasa, nanolotra fanantenana ny manampahaizana manokana, milaza fa mety ho akaikin'ny lembalemba ny firongatra, satria nanomboka nahita fihenan'ny aretina vaovao i Mumbai sy i Delhi. Na izany aza, nampitandrina ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana fa mety ho ratsy kokoa noho ny voalaza ankehitriny ny raharaha, satria miafina ny valanaretina any ambanivohitra.